‘Singayinqoba iTelkom Knockout’ - Tinkler
MINENHLE MKHIZE | October 9, 2019
UMQEQESHI weMaritzburg United u-Eric Tinkler usephonsele abadlali bakhe inselelo yokuthi banqobe isicoco seTelkom Knockout kule sizini.
ITeam of Choice ayikanqobi nesisodwa isicoco selokhu yaqala ukudlala sebhola esiphezulu eNingizimu Afrika. UTinkler wanqoba iTelkom Knockout ngo-2016 esaqeqesha iCape Town City, okwaba yisicoco sakhe sokuqala njengomqeqeshi.
UTinkler uveze ukuthi usephonsele abadlali inselelo yokunqoba lendebe. “Ngibachazelile abadlali ukuthi lena yindebe esingakwazi ukuyilwela. Asizame ukulwela lendebe. Kodwa iligi iyona ebaluleke kakhulu,” kuchaza uTinkler.
Kumasizini amabili adlule, iMaritzburg yaphunyukwa yiqatha emlonyeni ngenkathi ihlulwa yiFree State Stars emdlalweni wamanqamu weNedbank Cup owawubanjelwe eCape Town Stadium.
Leli qembu laseMphithi liyiqale kabi lesizini kodwa likhombise ukuvuka emaqandeni emidlalweni yeligi edlule njengoba liyinqobe yomibili ngaphambi kokuthi kuyiwe ekhefini leFIFA. EzikaTinkler zihleli kunombolo 11 kwi-Absa Premiership emuva kwemidlalo eyisikhombisa.
“Ngiyathemba ukuthi sesijika ikhona. Manje sekumele sishintshe ukudlala ngokuthembisa sikwenze ukuwina imidlalo. Ukuwina imidlalo kuzosenza sibe ngcono,” kusho uTinkler.
Unozinti waseGhana uRichard Ofori uyena kuphela umdlali weqembu ohambele izwe lakhe njengoba kuyikhefu leFIFA.
“Sizozama ukunikeza abadlali isikhathi sokuphumula kuleli khefu. Sizobuya sizothola imidlalo yesihle emaqenjini adlala kuPSL nalawo akuNFD,” kusho uTinkler.